လက်ရှိ 2020 Gebze Halkalı Marmaray အချိန်ဇယားခနှင့်မှတ်တိုင်များ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်လက်ရှိ 2020 Gebze Halkalı Marmaray လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားနှင့်မှတ်တိုင်များ
13 / 05 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, VIDEOS
နှစ် Gebze Halkali marmaray အချိန်ဇယားနှုန်းထားများနှင့်မှတ်တိုင်များ
မြေပုံနှင့် Marmaray Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ: ဥရောပနှင့် Anatolian ဘေးထွက်ဆက်သွယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray စီမံကိန်းကို Halkalı နှင့် Metro နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုရပ်နှင့်အချိန် Gebze များ၏ content တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ Halkalı Gebze Suburban လိုင်း 2019 တွင် Marmaray စီမံကိန်း၏သက်တမ်းအတွင်းအသစ်လိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ Halkalı ဒီသတင်းထဲမှာ Gebze Metro Line Stations အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေပေးပါတယ် Halkalı သငျသညျ Marmaray Expedition နာရီနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Marmaray ၏ဥရောပဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည် Halkalıက start ကနေ Gebze ရရှိသောရန်။ ဥရောပဘက်ခြမ်းတွင် Halkalı နှင့်Kazlıçeşme Marmaray, Anatolian ဘက်မှAyrılıkစမ်းရေတွင်းနှင့် Gebze အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်။ ဤစီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်ကို Anatolian Side နှင့် European Side ကိုဆက်သွယ်ပေးသောKazlıçeşme Separation Fountain လိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့သားများကောင်းစွာသိကြသည်။
Halkalı Gebze Marmaray မှတ်တိုင်များ
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အရှည်ဆုံးမြေအောက်ရထားလမ်းကြောင်းများကြောင်းအကြီးဆုံးရှိခြင်း Halkalı စုစုပေါင်း Gebze မက်ထရိုလိုင်း 43 ရပ်တန့် ဒီမှတ်တိုင်များမှ 15 ကြွင်းသောအရာဥရောပဘက်မှာ 28 အဆိုပါမှတ်တိုင် Anatolian ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Halkalı Mustafa Kemal Cevizli ဘိုးဘေး Basak Kartal Yunus Pendik Kaynarca သင်္ဘောကျင်း Aydıntepe İçmeler Tuzla Cayirova Fatih Osmangazi Darica Gebze
Marmaray မြေပုံ - Halkalı Gebze Marmaray လိုင်း
သင်သည်သင်၏ Marmaray မြေပုံကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
Halkalı Gebze Marmaray အချိန်ဇယား
Halkalı Gebze Marmaray ဟာမိနစ်ဘယ်လောက်ယူလဲ။
Marmaray စခန်းများ: Halkalı Gebze မြေအောက်ရထားထဲမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 42 မှတ်တိုင် ဒါဟာတည်ရှိသည်။ Halkalı 115 မိနစ်ဆင်းရပ်တန့်ဖို့ Gebze အကြားစုစုပေါင်းကာလနှင့်အတူ။ အကျဉ်းဖြစ် Halkalıထွက်ခွာသွားသည် 115 မိနစ် အမည်ရ 1 55 နာရီမိနစ် ဒါဟာ Gebze အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် Marmaray ၏မြေပုံရည်ညွှန်းကိုးကား!
halkali gebze မက်ထရို - marmaray ၏မြေပုံ
Halkalı Gebze Marmaray လွှဲပြောင်းခြင်း
Halkalı Gebze မီထရိုလိုင်းကနေတစ်ဆင့်အများအပြားလွှဲပြောင်းဘူတာတွင်တည်ရှိသည်။ Halkalı အောက်ဖော်ပြပါ Gebze Metro Line မှတစ်ဆင့်သင် metro လိုင်းများကိုကြည့်ရှုပြီးအကူးအပြောင်းများကိုရပ်နားနိုင်သည်။
Halkalı Yenikapıအတွက် M1B ဘူတာရုံHalkalı မက်ထရိုလိုင်းပြောင်းမှု
M1B Yenikapı-Kirazlıနှင့် M2 Yenikapı-Hacıosmanမက်ထရိုလိုင်းများYenikapıဘူတာမှလွှဲပြောင်း
Sirkeci ဘူတာရုံမှာ T1 Kabataş- Bağcılarရထားလမ်းနှင့်ပင်လယ်ကူးခြင်း
Eylul စမ်းရေတွင်းဘူတာရုံရှိ M4 Kadıköyဆားနှင့်မက်ထရိုလိုင်းကိုလွှဲပြောင်း
Üsküdarဘူတာတွင် M5 Üsküdar-lineekmeköyမက်ထရိုလိုင်းပြောင်းမှု
Göztepeဘူတာတွင် M12 Göztepe-Ümraniyeမက်ထရိုလိုင်းပြောင်းမှု
Bostancıဘူတာရုံရှိ M8 Bostancı-Dudullu မက်ထရိုလိုင်းပြောင်းမှု
Pendik ဘူတာတွင် M10 Pendik-Sabiha Gökçenလေဆိပ်မီတာလိုင်းလွှဲပြောင်း
İçmeler ဘူတာရုံ M4 မှာ Kadıköyဆားနှင့်မက်ထရိုလိုင်းကိုလွှဲပြောင်း
Halkalı Gebze Marmaray နှင့် YHT Ankara ဆက်သွယ်မှု
အပြည့်အဝနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် 2019 Halkalı ယင်းမှာတူရကီ YHT ၏ဆက်သွယ်မှု Gebze မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးခရီးသည်တူရကီကျွန်ုပ်တို့၏ Gebze, Pendik, Kartal, ဘော့, Sogutlucesme, Bakırköyကနေလာမယ့်နှင့် Halkalıရပ်တည်ရန်မှာ။
Gebze Halkalı Marmaray အခကြေးငွေဇယား (၁၀.၀၂.၂၀၂၀ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်)
1-7 မှတ်တိုင်များ: 3,5 TL
8-14 မှတ်တိုင်များ: 4,5 TL
15-21 မှတ်တိုင်များ: 5,2 TL
22-28 မှတ်တိုင်များ:6TL
29-35 မှတ်တိုင်များ:7TL
36-43 မှတ်တိုင်များ: 7,75 TL
40 ကျော်မသန်စွမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 65 အဟောင်းတွေခရီးသည် ID ကိုကတ်များနှင့်အတူအခမဲ့ခရီးသွားလာနိုင်သည်, မိသားစုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများဝန်ကြီးဌာနထံမှကတ်များလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
, ဒေတာ transfer လွှဲပြောင်းပါဘူး
အကယ်၍ Istanbulkart ကိုလူတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုလျှင်ပြန်အမ်းငွေတစ်ခုသာရသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်တွင်အသုံးပြုသောအများပြည်သူ subscription ကို (အပြာရောင်ကဒ်) ရရှိနိုင်ပါသည်။
2020 ခုနှစ်တွင် Gebze Halkalı Marmaray လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားနှင့်မှတ်တိုင်များ
Adana Metro အချိန်ဇယားသည်ကားခအစီအစဉ်နှင့်မြေပုံကိုရပ်လိုက်သည်
Antray Sefer Saatleri, ဇယား, Stations နှင့်မြေပုံ
Marmaray ဆင်ခြေဖုံးစနစ် Marmaray စခန်းများနှင့် Marmaray စျေးနှုန်းဇယား
Izmir Karşıyaka လမ်းရထားအချိန်ဇယား Stations ဇယားနှင့်မြေပုံ
Izmir Konak Tram အချိန်ဇယား Stations အချိန်ဇယားနှင့်မြေပုံ
လက်ရှိ Marmaray ထွက်ခွာချိန်နှင့်အခကြေးငွေ 2020
Başkentrayစခန်းများနှင့်အချိန်ဇယားများ - လက်ရှိ ၂၀၂၀
2019 လက်ရှိမြန်နှုန်းမြင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ YHT အချိန်နှင့်အစီအစဉ်ဇ
Antalya ဓါတ်ရထားလမ်းကြောင်းနာရီနှင့်အခကြေးငွေများ Tariff 2019
Konya လမ်းရထားမြေပုံ Konya လမ်းရထားဘူတာ၏အမည်နှင့်စျေးနှုန်းဇယား
Bursa Uludag Cable Car ကြေးအချိန်ဇယားအလုပ်ချိန်နှင့်ကားပါကင်အခကြေးငွေ 2019
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်ဖက်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသည်
Covid-19 စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်သို့တင်ပို့ခဲ့သည်
GAZİBİS Stations အခကြေးငွေဇယားနှင့်အဖွဲ့ဝင်အရောင်းအ
လက်ရှိ Marmaray ပျံသန်းမှုနာရီနှင့်အခကြေးငွေများ
နယူးကြေးဇယားအတွက် Kocaeli အတွက်ယာဉ်ရပ်နားစတင်
Halkalı Gebze ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားရထားလက်မှတ်ဖိုးများနှင့်လေယာဉ်နာရီ